8K TV: All You Need to Know - Technoland Myanmar
အသစ်ထွက်လာတဲ့ 8K TV တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေသိထားဖို့ လိုမလဲ?
လက်ရှိအချိန်မှာ 4K TV တွေကို နိုင်ငံတော်တော်များများမှာတောင် လူတိုင်းမကြည့်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နည်းပညာတွေကတော့ အမြဲတိုးတက်နေတာဖြစ်လို့ 8K TV တွေဆီကို ခြေလှမ်းစနေကြပါပြီ။ ဒီနေ့မှာတော့ 8K resolution က 4K ထက် ဘယ်လောက်ပိုကောင်းလာသလဲဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သိထားဖို့သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးမှာပါ။
8K ဆိုတာ ဘာလဲ? 4K တို့ HD တို့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ?
ခပ်ရိုးရိုးပဲတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် 8K ဆိုတော့ 4K Resolution ရဲ့ နှစ်ဆ ရှိမယ်လို့ ထင်ချင်စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ Resolution ကို တိုင်းတာတဲ့ပုံစံက နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက် အဲဒီလိုတွက်လို့မရပါဘူး။ 8K ဆိုတာဟာ TV ရဲ့ အလျားလိုက် resolution ကိုပဲ ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘယ်ဘက်အစွန်ကနေ ညာဘက်အစွန်ထိ pixel အရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုပါ။ ဒါကြောင့် ဒေါင်လိုက် pixel ကို ထည့်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ 8K TV တွေဟာ 4K ထက် pixel အရေအတွက် လေးဆအထိ ပိုများပါတယ်။ 1080p Full HD နဲ့ယှဉ်ရင် တစ်ဆယ့်ခြောက်ဆအထိပိုများမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တော်တော်ကိုများတဲ့ pixel အရေအတွက်ပါ။ HD ကနေ 8K ထိ Pixel ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် –
720p (HD) = 1280×720 pixels
1080p (FHD) = 1920×1080 pixels
4K (UHD) = 3840×2160 pixels
8K = 7680×4320 pixels
ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 720p ရဲ့ အထက်မှာရှိတဲ့ resolution တွေဟာ အလျားလိုက်ရော၊ ဒေါင်လိုက်ရောကို ထည့်တွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် လေးဆစီ ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
8K TV ကိုဝယ်သင့်သလား?
ခပ်တိုတိုပဲဖြေရမယ်ဆိုရင် လုံးဝ မဝယ်သင့်သေးပါဘူး။ အခုအချိန်ဟာ 4K TV တွေ ဈေးကျလာပြီး လူတိုင်းတတ်နိုင်တဲ့ဈေးတစ်ခုကို သိပ်မကြာခင်ရောက်လာမယ့် အချိန်ပါ။ ဒါ့အပြင် HDR ကိုလည်း 4K TV တော်တော်များများမှာ တွေ့လာရပါပြီ။ ဒါကြောင့် TV အသစ်တစ်ခုကို လက်ရှိအချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင် 4K HDR TV ပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ 8K ကို မဝယ်သင့်တဲ့အချက်တွေကို အောက်မှာဆက်ကြည့်ရအောင်။
Japan မှာကလွဲပြီး 8K ကိုအထောက့်အပံ့ပေးတဲ့ Video တွေမရှိသေးပါဘူး။
ဒီပြသနာဟာ 4K တွေပေါ်ခါစမှာလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ 4K TV တော့ရှိပါရဲ့ ကြည့်စရာ 4K Video တွေ မရှိတော့ သိပ်အသုံးမဝင်သလို ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာ 8K နဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေဟာ လက်ချိုးရေ လို့ ရလောက်အောင် နည်းနေပါသေးတယ်။ Japan မှာတော့ 8K ကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ထားတာ မကြာသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ 8K ရုပ်သံလိုင်းကို ကြည့်ဖို့အတွက် 8K TV အပြင် သီးသန့် satellite တစ်ခု လိုဦးမှာပါ။ 8K ဟာ သာမာန်လူတစ်ယောက်အတွက် ဈေးအရမ်းများနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ ၂၀၂၀ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို 8K နဲ့ ထုတ်လွှင့်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့တော့ သိထားရပါတယ်။
Upscaling ဆိုတာက resolution နည်းတဲ့ Video တွေကို နည်းပညာအကူအညီနဲ့ ပိုပြီးကြည့်ကောင်းလာအောင် အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်တာပါ။ 4K TV တွေမှာလည်း 1080p Video တွေကို upscale လုပ်ပြီး ကြည့်ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ကြည့်စရာရှားပါးတဲ့ပြဿနာကို အထိုက်အလျောက် ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ မူရင်း 4K ဗီဒီယိုတွေလောက်တော့ ကြည့်ရတာအဆင်မပြေပါဘူး။ 8K မှာလည်း အဲ့ဒီပြဿနာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
Streaming လုပ်ဖို့အတွက် အင်တာနက်အရမ်းကောင်းဖို့လိုမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူအများစု လက်ရှိ သုံးနေကြတဲ့ အင်တာနက် bandwidth ဟာ 4K resolution ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကိုတောင် တိုက်ရိုက် stream လုပ်ပြီး ကြည့်ဖို့ သိပ်အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် 4K ထက် pixel အရေအတွက် လေးဆပိုများတဲ့ 8K ကို ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အင်တာနက်လိုင်းက အရမ်းကိုကောင်းမှရမှာပါ။ 4K ကို Stream ဖို့ 20 Mbps ရှိတဲ့အင် တာနက်လိုင်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် 8K အတွက်တော့ အနည်းဆုံး 50mbps လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ 50 Mbps ဆိုတဲ့ bandwidth ဟာ US လို နိုင်ငံမျိုးမှာတောင် လူတိုင်းမသုံးနိုင်ကြသေးပါဘူး။
8K TV တွေဟာ စထွက်ခါစမှာ အရမ်းဈေးကြီးနေဦးမှာပါ။
နည်းပညာပစ္စည်းအသစ်တွေဟာ စထွက်ခါစမှာ အရမ်းဈေးကြီးလေ့ရှိပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဈေးသက်သာလာတတ်ပါတယ်။ 4K TV တွေ ပထမဆုံးထွက်လာချိန်မှာ $20000 ဝန်းကျင် ကျသင့်ခဲ့ပါတယ်။ 8K TV ကတော့ စထွက်ခါစအချိန်မှာ 4K တွေလောက်ဈေးမကြီးပေမဲ့ $15000 ဝန်းကျင်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် 8K TV တစ်လုံးအတွက် $15000 သုံးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားရင်တောင် အကောင်းဆုံး 4K TV နှစ်လုံးနဲ့ Sound System တစ်ခုဝယ်လိုက်တာက ပိုတန်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို 8K TV တွေကအကျိုးမရှိဘူးလား?
အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ 8K TV တွေက Resolution များတဲ့အတွက် Screen size ကို အကြီးကြီး ချဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်။ လက်မ 70 ရှိတဲ့ Screen size မှာ 1080p Resolution နဲ့ဆိုရင်အနီးကပ်ကြည့်တဲ့အခါ မျိုးမှာ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူး။ 4K TV တွေနဲ့တောင် ဆယ်ပေအကွာလောက်က ကြည့်မှ ချောချောမွေ့မွေ့ မြင်ရပါတယ်။ 8K TV တွေကတော့ screen size အရမ်းကြီးနေရင်တောင် အနီးကပ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေနိုင် မှာပါ။ Screen technology တွေအရလည်း 8K TV တွေမှာပါမယ့် နည်းပညာတွေဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေဦးမှာပါ။ Sony ရဲ့ 10000 nits Brightness အထိ ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ 8K TV, Samsung ရဲ့ room lighting အလိုက် ချိန်ညှိပေးပြီး မသုံးတဲ့အချိန်မှာ ရိုးရိုးနံရံလိုပဲဖြစ်နေမယ့် 8K TV တွေလိုမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုမှအစပြုတဲ့ နည်းပညာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် သာမန်အိမ်တွေမှာသုံးဖို့တော့ နှစ်အနည်းငယ်အချိန်ပေးရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသဈထှကျလာတဲ့ 8K TV တှနေဲ့ ပတျသတျပွီး ဘာတှသေိထားဖို့ လိုမလဲ?
လကျရှိအခြိနျမှာ 4K TV တှကေို နိုငျငံတျောတျောမြားမြားမှာတောငျ လူတိုငျးမကွညျ့နိုငျသေးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ နညျးပညာတှကေတော့ အမွဲတိုးတကျနတောဖွဈလို့ 8K TV တှဆေီကို ခွလှေမျးစနကွေပါပွီ။ ဒီနမှေ့ာတော့ 8K resolution က 4K ထကျ ဘယျလောကျပိုကောငျးလာသလဲဆိုတာနဲ့ ကြှနျတျောတို့ သိထားဖို့သငျ့တဲ့ အခကျြလေးတှကေို ပွောပွပေးမှာပါ။
8K ဆိုတာ ဘာလဲ? 4K တို့ HD တို့နဲ့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရငျ ဘယျလိုနမေလဲ?
ခပျရိုးရိုးပဲတှေးကွညျ့မယျဆိုရငျ 8K ဆိုတော့ 4K Resolution ရဲ့ နှဈဆ ရှိမယျလို့ ထငျခငျြစရာပါ။ ဒါပမေဲ့ Resolution ကို တိုငျးတာတဲ့ပုံစံက နညျးနညျးရှုပျထှေးတဲ့အတှကျ အဲဒီလိုတှကျလို့မရပါဘူး။ 8K ဆိုတာဟာ TV ရဲ့ အလြားလိုကျ resolution ကိုပဲ ရညျညှနျးတာဖွဈပါတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ဘယျဘကျအစှနျကနေ ညာဘကျအစှနျထိ pixel အရအေတှကျ ဘယျလောကျရှိလဲဆိုတာကိုပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒေါငျလိုကျ pixel ကို ထညျ့တှကျလိုကျတဲ့အခါမှာ 8K TV တှဟော 4K ထကျ pixel အရအေတှကျ လေးဆအထိ ပိုမြားပါတယျ။ 1080p Full HD နဲ့ယှဉျရငျ တဈဆယျ့ခွောကျဆအထိပိုမြားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ တျောတျောကိုမြားတဲ့ pixel အရအေတှကျပါ။ HD ကနေ 8K ထိ Pixel ဘယျလောကျရှိလဲဆိုရငျ –
ဒါကိုကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ 720p ရဲ့ အထကျမှာရှိတဲ့ resolution တှဟော အလြားလိုကျရော၊ ဒေါငျလိုကျရောကို ထညျ့တှကျရတာဖွဈတဲ့အတှကျ လေးဆစီ ဖွဈသှားတာကိုတှနေို့ငျပါတယျ။
8K TV ကိုဝယျသငျ့သလား?
ခပျတိုတိုပဲဖွရေမယျဆိုရငျ လုံးဝ မဝယျသငျ့သေးပါဘူး။ အခုအခြိနျဟာ 4K TV တှေ ဈေးကလြာပွီး လူတိုငျးတတျနိုငျတဲ့ဈေးတဈခုကို သိပျမကွာခငျရောကျလာမယျ့ အခြိနျပါ။ ဒါ့အပွငျ HDR ကိုလညျး 4K TV တျောတျောမြားမြားမှာ တှလေ့ာရပါပွီ။ ဒါကွောငျ့ TV အသဈတဈခုကို လကျရှိအခြိနျမှာဝယျမယျဆိုရငျ 4K HDR TV ပဲ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ 8K ကို မဝယျသငျ့တဲ့အခကျြတှကေို အောကျမှာဆကျကွညျ့ရအောငျ။
Japan မှာကလှဲပွီး 8K ကိုအထောကျ့အပံ့ပေးတဲ့ Video တှမေရှိသေးပါဘူး။
ဒီပွသနာဟာ 4K တှပေျေါခါစမှာလညျး ဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။ 4K TV တော့ရှိပါရဲ့ ကွညျ့စရာ 4K Video တှေ မရှိတော့ သိပျအသုံးမဝငျသလို ဖွဈနခေဲ့တာပါ။ လကျရှိအခြိနျမှာ 8K နဲ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ ရုပျရှငျတှဟော လကျခြိုးရေ လို့ ရလောကျအောငျ နညျးနပေါသေးတယျ။ Japan မှာတော့ 8K ကို အထောကျအပံ့ပေးတဲ့ ရုပျသံလိုငျးတဈခုကို မိတျဆကျထားတာ မကွာသေးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ 8K ရုပျသံလိုငျးကို ကွညျ့ဖို့အတှကျ 8K TV အပွငျ သီးသနျ့ satellite တဈခု လိုဦးမှာပါ။ 8K ဟာ သာမာနျလူတဈယောကျအတှကျ ဈေးအရမျးမြားနပေါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဂပြနျနိုငျငံကတော့ ၂၀၂၀ အိုလံပဈပွိုငျပှဲကို 8K နဲ့ ထုတျလှငျ့ဖို့ ကွိုးစားနတေယျလို့တော့ သိထားရပါတယျ။
Upscaling ဆိုတာက resolution နညျးတဲ့ Video တှကေို နညျးပညာအကူအညီနဲ့ ပိုပွီးကွညျ့ကောငျးလာအောငျ အဆငျ့မွှငျ့တငျလိုကျတာပါ။ 4K TV တှမှောလညျး 1080p Video တှကေို upscale လုပျပွီး ကွညျ့ရလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါဟာ ကွညျ့စရာရှားပါးတဲ့ပွဿနာကို အထိုကျအလြောကျ ဖွရှေငျးနိုငျတယျဆိုပမေဲ့ မူရငျး 4K ဗီဒီယိုတှလေောကျတော့ ကွညျ့ရတာအဆငျမပွပေါဘူး။ 8K မှာလညျး အဲ့ဒီပွဿနာ ရှိနနေိုငျပါတယျ။
Streaming လုပျဖို့အတှကျ အငျတာနကျအရမျးကောငျးဖို့လိုမှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ လူအမြားစု လကျရှိ သုံးနကွေတဲ့ အငျတာနကျ bandwidth ဟာ 4K resolution ရှိတဲ့ ရုပျရှငျတှကေိုတောငျ တိုကျရိုကျ stream လုပျပွီး ကွညျ့ဖို့ သိပျအဆငျမပွသေေးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ 4K ထကျ pixel အရအေတှကျ လေးဆပိုမြားတဲ့ 8K ကို ကွညျ့ဖို့အတှကျဆိုရငျ အငျတာနကျလိုငျးက အရမျးကိုကောငျးမှရမှာပါ။ 4K ကို Stream ဖို့ 20 Mbps ရှိတဲ့အငျ တာနကျလိုငျး လိုအပျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ 8K အတှကျတော့ အနညျးဆုံး 50mbps လိုမှာဖွဈပါတယျ။ 50 Mbps ဆိုတဲ့ bandwidth ဟာ US လို နိုငျငံမြိုးမှာတောငျ လူတိုငျးမသုံးနိုငျကွသေးပါဘူး။
8K TV တှဟော စထှကျခါစမှာ အရမျးဈေးကွီးနဦေးမှာပါ။
နညျးပညာပစ်စညျးအသဈတှဟော စထှကျခါစမှာ အရမျးဈေးကွီးလရှေိ့ပွီး အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ဈေးသကျသာလာတတျပါတယျ။ 4K TV တှေ ပထမဆုံးထှကျလာခြိနျမှာ $20000 ဝနျးကငျြ ကသြငျ့ခဲ့ပါတယျ။ 8K TV ကတော့ စထှကျခါစအခြိနျမှာ 4K တှလေောကျဈေးမကွီးပမေဲ့ $15000 ဝနျးကငျြရှိနပေါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ 8K TV တဈလုံးအတှကျ $15000 သုံးမယျလို့ စိတျကူးထားရငျတောငျ အကောငျးဆုံး 4K TV နှဈလုံးနဲ့ Sound System တဈခုဝယျလိုကျတာက ပိုတနျဦးမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါဆို 8K TV တှကေအကြိုးမရှိဘူးလား?
အဲ့လိုတော့မဟုတျပါဘူး။ 8K TV တှကေ Resolution မြားတဲ့အတှကျ Screen size ကို အကွီးကွီး ခြဲ့လိုကျလို့ရပါတယျ။ လကျမ 70 ရှိတဲ့ Screen size မှာ 1080p Resolution နဲ့ဆိုရငျအနီးကပျကွညျ့တဲ့အခါ မြိုးမှာ ဘယျလိုမှအဆငျမပွပေါဘူး။ 4K TV တှနေဲ့တောငျ ဆယျပအေကှာလောကျက ကွညျ့မှ ခြောခြောမှမှေ့ေ့ မွငျရပါတယျ။ 8K TV တှကေတော့ screen size အရမျးကွီးနရေငျတောငျ အနီးကပျကွညျ့လို့အဆငျပွနေိုငျ မှာပါ။ Screen technology တှအေရလညျး 8K TV တှမှောပါမယျ့ နညျးပညာတှဟော အကောငျးဆုံးဖွဈနဦေးမှာပါ။ Sony ရဲ့ 10000 nits Brightness အထိ ထုတျပေးနိုငျတဲ့ 8K TV, Samsung ရဲ့ room lighting အလိုကျ ခြိနျညှိပေးပွီး မသုံးတဲ့အခြိနျမှာ ရိုးရိုးနံရံလိုပဲဖွဈနမေယျ့ 8K TV တှလေိုမြိုးပါ။ ဒါပမေဲ့ အခုမှအစပွုတဲ့ နညျးပညာတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ သာမနျအိမျတှမှောသုံးဖို့တော့ နှဈအနညျးငယျအခြိနျပေးရဦးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
This entry was posted in Articles, Knowledge and tagged Accessories.